मृतक परिवारलाई रोल्पाली समाजको आर्थिक सहयोग — Chetana Online
मृतक परिवारलाई रोल्पाली समाजको आर्थिक सहयोग
घोराही । रोल्पाली समाज सेवा दाङले संस्थाका सस्थापक सहसचिव स्व. सिर कुमार बुढाको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
सस्थाको तर्फबाट ७ हजार ५ सय र सस्थाका कार्यसमिति तथा पदाधिकारीहरुले व्यक्तिगत रुपमा कुल ६ हजार १५ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका हुन् । किरिया खर्चबाफत सो रकम हस्तान्तरण गरिएको समाजका अध्यक्ष मदनकुमार वलीले जानकारी दिए ।
बुढालाई मदनकुमार वली, खर्कबहादुर डाँगी, बिशाल सुवेदी, हरिप्रसाद डाँगी, कृष्णबहादुर बुढामगर, रेवन्तकुमार श्रेष्ठ, खगेन्द्र बुढा, धनकुमार रोका, केवलप्रसाद खत्री, बुद्धिराम बुढा, व्रमण रोका र पूर्णबहादुर मगरले जनहि ५ सयका दरले सहयोग रकम प्रदान गरेका हुन् ।
क्यान्सरपीडि बुढाको ५१ वर्षको उमेरमा गत साता निधन भएको थियो । बुढाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले सस्थाले राहत स्वरुप सो रकम प्रदान गरेको समाजका कार्यसमिति सदस्य विशाल सुवेदीले जानकारी दिए । उनले समाजले यस्ता विभिन्न सामाजिक काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
यसैबीच समाजका अध्यक्ष मदनकुमार वलीले मृतक बुढाका सन्तानहरुको शिक्षाको खर्चका लागि आवश्यक पहल गरिने जानकारी दिए । उनले बुढाको निधनले सस्थालाई अपुरणिय क्षती पुगेको बताए ।
कोषाध्यक्ष रेमन्तकुमार श्रेष्ठले समाजले आगामी दिनमा यस्तै खाले सामाजिक कामहरु निरन्तर गर्ने बताए । समाजले हाल एम्वुलेसन्स सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । निकट भविष्यमै शव बहान ल्याउने तयारी भइरहेको अध्यक्ष वलीले बताए ।
हिजो मैले जंगल जान्छु भनेको फेरि लडाईं र हिंसाको लागि जान्छु भनेको होइन : प्रचण्ड
डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन् : साम्यवाद सम्भव भएन त्यसैले फोरमसँग एकता
विमित देवकोटाको परिवारलाई एलआइसीको १२ लाख ८८ हजार
सुजुकीको ‘वागनआर’ कार दङ्गाली बजारमा
पत्रकार नारायण विवशका बुढाबुढी बने असल छोरा बुहारी
आज देशभर मौसममा बदली, हावाहुरी र चट्याङसहित पानी पर्ने सम्भावना
काठमाडौंका धुलाम्य सडकमा एक साता पनि टिकेन महानगरपालिकाको ब्रुमर
खेतीयोग्य जमिन लगातार ३ वर्षसम्म बाँझो राखे ३ लाखसम्म जरिवाना गरिने